Ike Sistem egwuregwu 6 ikuku ekweisi nyocha | Gam akporosis
Energy Sistem egwuregwu 6 ekweisi nyocha
Taa ọ bụ oge ịgwa gị banyere ụfọdụ TWS ekweisi ọzọ si n'aka Energy System. Ikuku ekweisi egwuregwu 6. A ngwaahịa n'ụzọ doro anya Ezubere maka egwuregwu na mmega ahụ ejiri ihe na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọgwụ.
Taa, anyị na-eweta ihe ọzọ na-adọrọ mmasị maka ndị chọrọ ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị ha mgbe ị na-eme egwuregwu ha Ọkacha mmasị. Na egwuregwu 6 nke Energy System bụ ezigbo nkwado iji mee ya na enweghị mgbochi.
1 Egwuregwu 6 site na Energy System, onye ọzụzụ
2 Egwuregwu 6 na-emeghị ihe ọ bụla site na Energy Sistem
3 Dị na ụdị egwuregwu 6
3.1 Chaja ikpe
Egwuregwu 6 site na Energy System, onye ọzụzụ
Ọ bụrụ na ike gwụ gị ị na-achọ ekweisi kwesịrị ekwesị na-ege ntị gị music mgbe na-eme egwuregwu taa anyị nwere ihe magburu onwe nhọrọ. N'ime ọtụtụ onyinye dị n'ahịa ọ bụ ihe nkịtị na ọ na-esiri anyị ike ikpebi. Oge a ka anyị ga-agwa gị ihe niile gbasara egwuregwu 6 nke Energy Energy.
Egwuregwu 6 nwere IPX7 asambodo iguzogide mmiri mmiri. Atụla egwu ịme ka mmiri ha na ọsụsọ ma ọ bụ n’ihi na ha nwere ike ifesa mgbe mmiri na-ezo. Ozugbo ị gụsịrị ọzụzụ gị ị nwere ike ịsa ha n’okpuru mgbata iji mee ka ha dị ọcha Nsogbu adịghị. Na ekele dịrị mmezi "nchekwa dabara"nke ahụ na-enye anyị nkwado na-agbanwe agbanwe, ha agaghị ada mgbe ị na-enye ihe niile na-eme egwuregwu.
Si buscas ekweisi zuru oke iji soro gị n'oge egwuregwu gị N’achọghị nchegbu gbasara mmebi ha, echefula atụmatụ ndị achọtara na egwuregwu Energy System 6. Nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ, nguzogide mmiri na-egosi na ọtụtụ awa nke nnwere onwe. O bu ihe ichoro? Zụta ha ugbu a na Amazon na mbufe n'efu.
Egwuregwu 6 na-emeghị ihe ọ bụla site na Energy Sistem
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị na-eleba anya n’ihe niile anyị hụrụ n’ime igbe egwuregwu ekwe ntị isii 6. Anyị na-achọta ekweisi, chaja akpa na nkenke, ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya ya, na-enweghị ihe ijuanya ma ọ bụ mgbakwunye.
Anyị nwere eriri na-akwụ ụgwọ maka ikpe chaja nke dị mkpụmkpụ. A obere broshuọ nke Ntụziaka ya na data sitere na nkwa, wdg. Na, dị ka ọ dị na mbụ Isi ekwe ekwe, abụọ ọzọ pad maka ekweisi na a mpụta mpụta mpụta a na-ejide ya n'ime ntị.
Dị na ụdị egwuregwu 6
Ọzọkwa, site na enyemaka nke Energy Sistem, anyị na-ahụ ekweisi na anya dị ka onye ọ bụla ọzọ site n'ahịa. Ọ na-agwụ ike ịhụ ngwaahịa nke yiri ibe ha. Ejiri ndị ọzọ mee, depụtaghachiri ma ọ bụ sitere n'ike mmụọ nsọ nke ndị ọzọ na-eme ka ha na-agwụ ike ma bụrụ ndị na-adịghị mma. Egwuregwu 6 nwere a 100% dị iche iche square udi imewe.
Wuru na ihe plastik na aka dị nro na matte agwụcha. Anyị hụrụ ngwaahịa na jikọta agba abụọ dabara nke ọma. A dum adụ apụl na-acha akwụkwọ ndụ na ndị ọzọ na agba aja aja dịkwa nro nke na-enye onyonyo ọhụụ ma na-adọrọ adọrọ na-enweghị oke oke. Ugbu a i nwere ike zụta Energy Sistem egwuregwu 6 na Amazon.
Ha nwere intraura usorol, ya bụ, akụkụ nke igwe okwu ahụ dị kpam kpam n'ime oghere ntị. Yabụ na ahụmịhe ahụ zuru ezu ma nwee afọ ojuju anyị hụrụ pad atọ dị iche iche. Nke a na - eme ka ọ dịrị onye ọ bụla mfe ịnụ ụtọ ụdị egwu kacha mma.
Ekweisi nwekwara roba mpụta nke na-eje ozi dabara n'enweghị nsogbu na ntị anyị. ama m dabara anatomically n'ime nke pinna ma nyekwa ya mgbakwunye ọzọ ka ọ ghara ịgagharị. Anyị na-ahụkwa roba ọzọ nke buru ibu. Rubber ahụ anyị nwere ike ịkwụsị ma ọ bụrụ na anyị agaghị eme egwuregwu nke ekweisi.
Igweisi nwee bọtịnụ anụ ahụ na akuku nke di n'èzí. Anyị nwere ike iji ha kpọgidere ma ọ bụ bulie oku. Mee ọ rụọ ọrụ olu olu. Na-ejikwa ịkpọ egwu jiri egwu ma ọ bụ kwusi, ma na-aga egwu n’iru ma ọ bụ azu. Mkpọchi ndị ahụ nwere ezi uche nke mere na anyị agaghị enwe nnukwu nrụgide ma nke a nwere ike ime ka ha daa.
Egwuregwu 6 nke Energy Sistem nwere a odori igbe dị ka ihe mbụ dị ka ekweisi onwe ha. Na apụl na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba aja aja, ọ bụ ezie na e nwekwara nsụgharị na-acha anụnụ anụnụ na isi awọ. Ya okirikiri udi Ọ na-adọrọ adọrọ n'anya ma na-emetụ aka, dị ka ekweisi, ọ dị nro ma nwee ezigbo njikwa.
Lee ị nwere ike ịzụta ugbu a Egwuregwu Sistem ike 6
Aka na Micro USB n'ọdụ ụgbọ mmiri ma nye karịrị ụgwọ atọ ọzọ zuru ezu Isi igwe batrị na-enweghị mkpa maka plọg. Na a na-edozi igwe isi iji hụ na a zuru okè kwesịrị ekwesị mgbe loading. Anyị chọtara ụfọdụ Ikanam ọkụ na-egosi odori ọnọdụ. Na bọtịnụ iji gbanye ma ọ bụ gbanyụọ ụgwọ nke ekweisi.
una Kọmpat na-eguzogide ọgwụ Nchaji ikpe na anyị nwere ike iburu nke ọma na akpa ọ bụla. Nke ahụ ga-echebekwa ekweisi anyị mgbe ị na-akwụ ụgwọ. Ngwaahịa dị mma nke na-enye ezigbo arụmọrụ na ọnụahịa dị mma.
Nlereanya egwuregwu 6
Imebe na ntị
Ugboro nzaghachi 20 Hz - 20 kHz
Oge ọrụ 2.4 GHz
Njikwa olu SI
Njikwa playback SI
Onye enyemaka olu dakọtara SI
Batisi ekweisi 45 mAh
Onwe ya Awa 5
Batrị chaja chaja 300 mAh
Exton obodo kwụụrụ Awa 15
Oge ngwụcha oge Oge 1
Akụkụ ekweisi 25 x 25 mm
Ibu ekweisi 5 g
Chaja ikpe akụkụ 55 x 32
Chaja ikpe ibu 48 g
Ahịa 47.99 €
Linkzụta njikọ Egwuregwu Sistem ike 6
Ezi ihe kwesịrị ekwesị nke ekweisi ekele na-agbanwe agbanwe rubbers nke dị n'ime akụkụ dị n'ime elu nke ntị.
El imewe mara mma ma ihe nke ewu na-eme egwuregwu omume.
La IPX7 asambodo na-eme ka anyị ghara ịtụ egwu na ha nwere ike imebi ma ọ bụrụ na ha na-ede mmiri ma ọ bụ na-efesa.
Mmezi zuru oke
El ịkwụ ụgwọ USB dị oberema ọ bụ ma ọ bụrụ na anyị ejikọta ha na mgbidi ha na-anọgide na-atụgharị.
La nnwere onwe nọrọ ntakịrị mkpụmkpụ, ọkachasị nke okwu chaja na-elebara akụkụ ya anya. Enwere ike ịnwe batrị nwere ihe karịrị 300 mAh nke ụgwọ dị.
Egwuregwu Sistem ike 6
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Energy Sistem egwuregwu 6 ekweisi nyocha
Nke a bụ ihe nhazi nke Samsung Galaxy Note 20?